OnePlus kwadoro nkọwa nke ihuenyo nke OnePlus 7 Pro | Gam akporosis
Otu n'ime atụmatụ ndị dị na OnePlus 7 Pro bụ ihuenyo ya. Ma ọ bụ na mgbe CEO kwuru nke ahụ ọ ga-adọrọ mmasịUgbu a, amaara ya nke ọma na ọ bụ teknụzụ AMOLED nakwa na ọ ga-enwe ọnụọgụ ume 90 Hz, nke dị elu karịa nke ọtụtụ smartphones ugbu a na ahịa, gụnyere ndị dị elu.
Ruo mgbe awa ole na ole gara aga, OnePlus gbachiri nkịtị banyere ọnụego ume ekwentị, yana ihe amaara ebe ahụ bụ ịkọ nkọ na nkwenye, ọ dịghị ihe siri ike. O sina dị, ụlọ ọrụ ahụ egosiworị ọnụọgụ mmelite ziri ezi nke ngwaọrụ ahụ ke ukara teasers gwa ka tech saịtị.
TechRadar Senior Editor Matt Swinder kesara ihe osise nke akwụkwọ ọkwa gọọmentị ọ natara n'aka OnePlus na Twitter. Mpempe akwụkwọ, yiri nke ndị ọzọ anyị hụgoro site n'aka onye nrụpụta, na-akwado nke ahụ ekwentị nwere ngosipụta 90 Hz.
Nke a rutere taa na @IGIHE @ekpeepe office: M na-eche ihe @onyinye @OnePlus_USA @PeteLau ga-ebido Tuesday ??? #nke # ata Ọ bụ pic.twitter.com/YHL3SB0q49
Matt Nwachukwu (@nwachukwuken) Nwere ike 11, 2019
Dị ka a pụrụ ịhụ site na posta, OnePlus na-ekwu na atụmatụ ahụ abụghị nke ndị ọrụ rịọrọ ma ọ bụ na agbakwunyere n'ihi na a nụrụ asịrị na ndị asọmpi na-emepe ya maka ekwentị ha. Mkpebi ahụ bụ iji nye ndị ọrụ ya ngosi ngosi 90Hz n'ihi na ọ ka mma.
Companylọ ọrụ ahụ gosikwara nke ahụ curved ekwentị ihuenyo jikoro 6.67 sentimita (tụrụ diagonally) na enweghị notch. Nke a dị ka mkpebi amamihe dị na ya, iwepu notchDịka ihe ngosi ngosi ga-egbochi ya site na ịpịpu onwe ya, ma ọ bụ na ị cheghị otú ahụ?
The OnePlus 7 Pro, nke a ga-eweta nke a na-abịa Mee 14, ga-enwe Mbido igwefoto okpukpu atọ na mbugharị anya 3x, igwefoto onwe onye mmapụta (nke a gosikwara ugbu a), ndị na-ekwu okwu stereo na nchekwa UFS 3.0, yana nkọwa ndị ọzọ anyị ga-akwado ma emechaa. Agbanyeghị, ọ gaghị enwe nkwado maka ikuku na-akwụ ụgwọ, ma ọ bụ ụda jaket 3.5mm, nke ga-emechu ndị ọrụ mgbanwe ihu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » OnePlus kwadoro nkọwapụta ihuenyo nke OnePlus 7 Pro